Xasuusin: Zakat Al-Fitr ha hilmaamin | Somaliska
Maadaama la marayo dhamaadka Ramadaanka waxaan idin xasuusinayaa in aad bixisaan Zakat Al Fitr. Qaar ka mid ah Muslimiinta Sweden waxaa dhibaato ka haysataa cidii ay siin lahaayeen iyo qaabkii ay u bixin lahaayeen Zakat Alfitriga.Oo waajib ku ah in ay bixiyaan ka hor salaada ciida ee ku aadan dhamaadka isbuuca soo socda.
Waxaa jira wadooyin kala duwan oo aad ku bixin karto. Anigu waxaan ku bixiyay internetka oo waxaan u diray hay’ada caalamiga ah ee gargaarka bani’aadamka Islamic Relief Sverige. Hay’adaan ayaa ku dhawaaqday in la bixinayo 75 KR qofkii oo lagu soo dirayo koontooyinka ay u diyaarisay barnaamijkaan ama internetka. Hadaba cidii doonaysa in ay bixiso lacagta Zakat Al-fiktriga ayaa waxay ku diri karaan koontooyinka hoose ee ay leedahay Islamic Relief Sverige ama waxay booqan karaan bogga hay’da oo ay toos uga bixin karaan.
Walaalayaal Zakawaatkiina waxa siisaan masaakiinta gaar ahaan Soomaalida dalkii ku tabaalaysan.
Zakadaada qarash ahaana u diree qof aad garane ayaana wakiilane isaga kaa bixinaa.
Tusaale aniga Zakadaydii Fitriga iyo inta masuul ka ka ahaa waxa baxshay 28 Ramadaan oo maanta ah qof dalkii joogaana u wakiishay Alxamdulillaah.